Qoys Deggan Hawdka Gobolka Sanaag Oo Khaati Ka Jooga Dhagaxaan Aanay Arkayn Cidda Soo Tuureysa Oo Lagu Dhaawacay Caruur Ay Dhaleen Iyo Bahalo Muuqaal Qof Leh Oo Soo Fadhiista Goobta Ay Dabka Ku Shitaan - Wargane News
Home Entertainment & Lifestyle Qoys Deggan Hawdka Gobolka Sanaag Oo Khaati Ka Jooga Dhagaxaan Aanay Arkayn...
Qoys Daggan baadiyaha gobolka sanaag ayaa waxa lagu hayaa weeraro iskugu jira dhagax tuur iyo dhibaatooyin kale oo ay kamid yihiin in xoolaha habeenkii oodda laga qaado oo la dareeriyo.
Qoyskan ayaa sidoo kale laga dhaawacay gabadh yar oo dhagax lagu dhuftay.
Hooyada qoskan oo arinkani laga waraystay ayaa sheegtay in kadib markii ay si lama filaan ah xilli galab ah u dhaawaceen bahasha loo yaqaano Musacagalayda isla habeenkiiba uu dagaal ku bilowday.
Qoyskan oo 8 caruur ah iyo waalidkood ka kooban ayaa waxa mushkilad ku noqotay dhagaxaan muddo 25 cisho ah lagu soo tuurayay oo aanay garanayn cid kusoo tuuraysay iyo meel laga soo tuurayo toona,iyo waliba wax muuqaal qof u eeg leh oo soo fadhiistay goobta yar ee ay dabka ku shitaan wakhtiyada ay cuntada karsanayaan,waxaanay hooyada qoyskan oo ka waramaysa siday u jiraan ayaa waxay tidhi.
“Guriga oo meel walbaaba awdan tahay oo meel banaan lahayn ayaad soo galaysaa oo weelkii in lagula dhaco oo kabihii aad bixisay lagu dhaco ayaa imanaysa,meel waxa ku shiidayaa kasoo galayaana ma garanaysid.Dhagaxu wuu nagu dhacayaa oo inan yar oo aan dhalay ayaaba lagu dakhray”sidaas ayay tidhi hooyada qoyskan .
Waxaanay hooyadani intasi raacisay in gurigii ay dhibaatadani uga guureen balse aanay wali ka daba hadhin dhibkii iyo dhagax tuurkii aan la garanayn cid soo tuuraysa,sidoo kalena hooyadan ayaa la waydiiyay meesha ay iyadu filayso in qisadan uga timi waxaanay ku jawaabtay.
“waxaa goor galab ah la taabtaabtay bahasha loo yaqaano Musacagalayda,waxa ay ku jirtay meel god ah,waxaana la mooday abeeso,qori ayaa lagu gugujiyay oo waxa laga dalooliyay dhabarka markii la gartay inaanay waxani abeeso ahayn waa layskaga tagay ,arinkaasina xilli salaad casar ah kadib ayay ahayd oo habeenimadii waa naloo yimi oo waxaa nalagu bilaabay weerarkaa dhagaxaanta ah”sidaas ayay tidhi hooyadani.
Mid kamida afar culimo ah oo loo keenay qoyskan si ay quraan ugu akhriyaan ayaa isaguna sheegay in qoyskan lala dhacay dhagaxaan,qoryo,baytaryada tooshashka iyo waxyaalo kale oo aan meel laga keenay la garanayn lala dhacayo qoyskan kuwaaos oo waliba la moodo in biyo lasoo mariyay oo wada qoyan,waxaanu sheekhu dhacdadan ku macneeyey inay tahay waxyaalaha uu jinku sameeyo loona fasiran karo inay ka timi bahashii ay dadkaasi waxyeeleeyeen .
Dhacdadan ayaa waxay noqonaysaa dhacdadii labaad ee inta la ogyahay ka dhacday deegaanka ay reerkani dagan yihiin.